सगुन एप डाउनलोड गर्नेलाई आकर्षक 'गिफ्ट ह्याम्पर', Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौँ । सगुनको एप डाउनलोड गर्नेलाई आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गरिएको छ। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि सगुनको मोवाइल एप पुष २५ गते सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त एप डाउनलोड गर्दा सगुनले एक वर्षे निशुल्क इन्टरनेट सेवा, निशुल्क स्वास्थ्य जाँच सुविधालगायतका विभिन्न आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गरेको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघको आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आजबाट सुरु भएको २४ औं संस्करणको सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१८ मा सगुनले समेत आफ्नो स्टल राखेको छ। ६ दिनसम्म चल्ने उक्त मेलाको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए।